FIKASIHAN-TANANA MPANDALO :: Mpianakavy saika nidiran-doza • AoRaha
FIKASIHAN-TANANA MPANDALO Mpianakavy saika nidiran-doza
Mbola miady mafy amin’ny fahafatesana ny raim-pianakaviana iray voalaza fa niharan’ny fikasihan-tanana. Fianakaviana iray kosa no voatondro ho tompon’antoka tamin’izany herisetra izany ka voatery noentin’ ny pôlisy nampandosirina ny tanànany noho ny hambana fitsaram-bahoaka efa namaivay.
Ny alin’ny alatsinainy lasa teo no niantombohan’ ity raharaha mafana ity. Niantefan’ny hatezeran’ ny andian’olona ihany anefa ny fananan’ity fianakaviana iray monina ao Ampahatra Antsirabe ity. Araka ny fitantaran’ny loharanom-baovao dia raim-pianakaviana iray avy namonjy fety tany amin’ny toeram-piasany no naratra mafy vokatry ny tsindron’antsy miisa iraika ambin’ny folo niampy vono isan-karazany nataon’ny lehilahy roa.
Raha ny fanampim-panazavana ihany dia ny filazana an’ity lehilahy niharan’ny herisetra ity ho niankina tamin’ny fefin’itsy fianakaviana itsy no antony nihavian’ny fikasihan-tanana. Ireo olona eo amin’ny manodidina indray manampy amin’ny firesahana ho fisian’ny lonilony teo amin’ny fiaraha-monina ka niafara tamin’izao fandratrana izao.
Fikasana hamaky trano kosa anefa no voarakitra ao amin’ny fitoriana nataon’ilay fianakaviana tamin’io lehilahy maratra mafy io. Tezitra noho izao famonona izay faritan’izy ireo ho niniana natao izao, sy ny voalaza ho fanendrikendrehana an’ilay raim-pianakaviana naratra, ny mponina manodidina ka nikasa ny hanao fitsaram-bahoaka.
Soa fa voasoroka ny hatezeram-bahoaka ka tsy nisian’ny valifaty mety ho nandratra na namoizana aina. Ny alin’ny talata teo, nanomboka tamin’ny sivy ora alina, ireo andian’ olona no nivorivory
nanodidina ny tranon’ilay fianakaviana voatondro ho mpihetraketraka. Nalaky tonga ny mpitandro filaminana. Nalain’ireto farany ny eni-mianaka monina ao amin’ilay tokantrano.
Voatery nanapoaka basy mihitsy mba hanaparitahana an’ireo olona nitangorongorona ireo mpitandro filaminana, izay vao afaka nitondra an’ireo olona narovany. Vao mainka nahatezitra an’ireo mponina indray izany ka ny tanàna onenan’io fianakaviana io no tsy nananan’izy ireo hantra. Potika ny fefy sy ny zava-maniry rehetra teo an-tokotany. Simba tanteraka ihany koa ny trano fivarotan’izy ireo.
Efa nahazo ny fiarovana tandrify azy ireo fianakaviana ireo, amin’izao fotoana izao. Efa tazonina satria ilaina amin’ny fanadihadiana kosa ireo roa lahy voalaza fa tompon’antoka tamin’ ny fandratrana an’ilay raim-pianakaviana.
FIFANDONANA TANY ANATY ALA :: Jiolahy roa lavo, avotra ilay zokiolona natao takalon’aina
FANANGANANA NY LAPAN’NY TANÀNA :: Notebahan-dRajaobelina Mamy ny laingan-dRavalomanana